ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက စိုက်ထူထားသည့် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၄၅၆ တိုင်?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက စိုက်ထူထားသည့် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၄၅၆ တိုင်??
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ခြောက်လတာဘတ်ဂျက်ကာလအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စိုက်ထူထားသည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၄၅၆ တိုင်ကို မဲနှိုက်စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၄၅၆ တိုင်ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်လိုသည့်အတွက် လာရောက်လျှောက်ထားသူ ၅၃၁၅ ဦးရှိခဲ့သည်။ ယင်းဆိုင်းဘုတ်တိုင် ၄၅၆ တိုင်အတွက် မဲနှိုက်အငှားနေရာချပေးထား ပေးခြင်းကို မတ် ၂ဝ ရက်က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆိုင်းဘုတ်တိုင်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်တစ်ခုလျှင် စပေါ်ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ ပေးသွင်း၍ အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိလျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မဲမပေါက်ခဲ့ပါက ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့် ကျပ်သိန်း ၂ဝ ကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဘဏ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနမှလက်ထောက်ဌာနမှူးဦးစစ်မင်းဟန်ကပြောသည်။ ”ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မဲပေါက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ဧပြီ ၁ ရက်ကနေ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လဘတ်ဂျက်ကာလအထိ ဆောင်ရွက်ရမယ်။ မဲပေါက်တဲ့သူနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး စာချုပ်ပါစည်း ကမ်းချက်ထဲမှာ အခြားသူကိုပြန် မရောင်းရပါဘူးဆိုတာလည်းပါတယ်။ အဲဒီငှားရမ်းထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တိုင်မှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားခဲ့ရင် မဲပေါက်ထားတဲ့ ငှားရမ်းသူကပဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်း ရမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ငှားရမ်းခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ကျသင့်ငှားရမ်းခငွေပေးချေပြီး ဧပြီ ၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ခြောက်လဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အထိ လအလိုက်ကျသင့်ငွေတွက်ချက်ကာ ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့်စပေါ်ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ ကိုခုနှိမ်၍ ကျန်ငွေများကိုအကျေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကြေညာဆိုင်းဘုတ်တိုင်ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် ယင်းဆိုင်းဘုတ်တိုင်များတွင် ကြော် ငြာလုပ်ငန်းများကိုလက်ခံနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် အပြောင်းအလဲ(ဥပမာ-ကော်ဖီမစ် ကြော်ငြာထားရာမှ အချိုရည်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း)ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ထံသို့ ကျပ်ငါးသောင်းအခွန်ငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ်းနားလမ်းနှင့်အလုံလမ်း ပေါ်ရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်အမှတ် (၂၁၁) ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့် RMA ကုမ္ပဏီမှမန် နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးထွန်းထွန်း”ငှားရမ်းခပေးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန် တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တိုင်ပေါ်မှာ ကြိုက်တဲ့ ကြော်ငြာတင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Deposit က ကျပ်သိန်း ၂ဝ တင်ရတော့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သမားတွေနဲ့မီဒီ ယာသမားတွေကတော့နည်းနည်း အဆင်မပြေဘူး။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် တိုင်တစ်တိုင်ကိုကျပ်သိန်း ၂ဝ တင် ရတော့ များများမလျှောက်နိုင်ဘူး။ ငွေများများတင်ထားနိုင်တဲ့သူက တော့ ပိုပြီးမဲပေါက်ဖို့ပိုများတာပေါ့” ဟုပြောသည်။ (၄၅x၁၅)ပေ အရွယ်အစား ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များကို ငှားရမ်း နေရာချထားပေးရာတွင် အနေအထားအလိုက် အုပ်စုငါးစုခွဲကာငှား ရမ်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အုပ်စုအေအ တွက် ခြောက်လစာငှားရမ်းခကျပ် ၁၂၅ သိန်း၊ အုပ်စုဘီမှာကျပ်သိန်း ၉ဝ၊ အုပ်စုစီမှာ ကျပ် ၆၇ သိန်း၊ အုပ်စု ဒီမှာကျပ်သိန်း ၅ဝ နှင့်အုပ်စု အီးမှာကျပ် ၂၅ သိန်းတို့ဖြင့် ရန်ကုန်စည်ပင်ထံ အခွန်ပေးသွင်းငှား ရမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ငှားရမ်းသူများက ဆိုင်းဘုတ်တစ်တိုင်အတွက် စပေါ်ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ တင်ရကြောင်းသိရသည်။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များကို အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ရာ အုပ်စု အေအဆင့်ဆိုင်းဘုတ်တိုင်များကို လျှောက်ထားသူ ၄ဝဝဝ ကျော်ထိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြို့စွန်များရှိဆိုင်းဘုတ်တိုင်များကို အုပ်စုအဆင့်အီးအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး လျှောက်ထားသူ အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အလှူရှင်များလှူဒါန်းထားသောအလှူငွေများကို မြဝတီအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာများက တောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သဲဖြူကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်လှူဒါန်း
ဒလ-ကျောက်တန်း ကြိုးတံတားကို သီလဝါ စက်မှုဇုန်ဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်နိုင်ရန် စီမံထားဟု ဆောက်လုပ်ေ??